Wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka oo tababaranaysa diblamaasiyiin cusub. – Radio Daljir
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka oo tababaranaysa diblamaasiyiin cusub.
Muqdisho, Oct 05 ? Wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa wadda tallaabooyin lagu tababarayo aqoonyahanno Soomaaliyeed ah kuwaasi oo loo carbinayo hawlo diblamaasiyadeed oo dalka iyo dibadda ah.
Shaqaalaha cusub ee haatan wasaaradda arrimaha dibaddu u laylinayso shaqooyinka duullimaasinimo ayaa tiradoodu gaaraysaa 17 xubnood kuwaaso oo tababar socon doono muddo afar bilood ah loogu qaadi doono waddanka isku-tagga imaaraadka carabta.
Aqoonyahannada loo carbinayo hawlaha shaqo ee wasaaradda arrimaha dibadda oo lagu wado in ay dalka ka dhoofaan maalinta Jicmaha ee soo socta iyagoo tagi doona magaalada Dubai halkaasi oo tababaridda duullimaasinimo ay uga bilaaban doono.
Shir wadajir ah oo ay maanta magaalada Muqdisho ku qabteen xubnahaasi loo tababarayo hawlaha duullimaasiyadeed ee Soomaaliya ayey ku muujiyeen dareenkooda farxadeed ee ku aaddan hawlaha loo laylinayo, iyagoo ballan-qaaday daacadnimo iyo xilkasnimo in ay ugu adeegi doonaan shacabka Soomaaliyeed.
Aqoonyahannadaan oo laga kala xulay gobollada kala duwan ee dalka ayaa marka ay soo dhammaystaan koorsoonkooda waxbarasho waxaa loo qaybin doonaa safaaradaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya ay ku leedahay dalalka adduunka, iyadoo qaar ka mid ahna ay ka shaqayn doonaab dalka, waxaana jiri doono kuwa lagu furi doono safaarado cusub oo dawladda hadda ku talo jirto.
Waa markii ugu horraysay ee wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka KMG ee Soomaaliya ay tababar bannaanka ah u qaado tiro dad ah oo intaasi le?eg, una carbiso shaqooyinka ay si gaar a u leedahay wasaaradda arrimaha dibadda.